Amin'ity indray mitoraka ity, Microsoft Edge dia ho tonga amin'ny iOS alohan'ny faran'ny taona | Vaovao IPhone
Tamin'ny taon-dasa, tamin'ny fotoana nitadiavan'ny taona ihany, namoaka vaovao izahay izay nanambarana fa Nikasa ny handefa kinova finday an'ny mpizaha azy i Microsoft Natokana ho an'ny Windows 10: Microsoft Edge. Saingy rehefa afaka nanamarina izahay dia tsy nahita ny jiro izany tamin'ny farany.
Nipoitra indray ny tsaho izay nanambarana azy indray fa Microsoft, amin'ity indray mitoraka ity, dia mikasa ny handefa ny tranokala findainy ho an'ny finday. sisin'ny tsy misy afa-tsy amin'ny kinova desktop 10 an'ny Windows XNUMX, noho izany ity hetsika ity dia ahafahany manitatra ny anjarany amin'ny tsena, ny fizarana iray izay mitohy mihena.
Hatramin'ny nanombohany, tamin'ny alàlan'ny Windows 10, ny Edge tsy ankafizin'ny mpampiasa indrindra noho ny tsy fisian'ny endri-javatra toy ny fanitarana na ny fahaizan'ny fampandrindrana mari-tsoratra tsy mandeha lavitra. Mpampiasa maro no lasa zatra manana ny angon-drakitra fitetezam-paritany amin'ny findainy, fiasa izay tsy misy afa-tsy amin'ny Safari, Chrome ary Firefox ao amin'ny biraony sy ny finday. Amin'ny farany, toa tsapan'i Microsoft fa ny fomba tokana hitombo dia ny fanitarana ny isan'ny fitaovana misy azy, toy ny Chrome, mpitety izay azo alaina amin'ny sehatra rehetra eny an-tsena.
Taorian'ny tsy fahombiazan'ny Windows 10 Mobile dia toa i Microsoft izany tsy te hiala amin'ny telefaona tanteraka ianaoKa ny fanombohana ny Microsoft Edge ho an'ny fitaovana finday dia mety ho teboka niova ho an'i Microsoft mandra-pandefany ilay Surface Phone efa ela nielezana, raha farany ary ny fiafaran'ny ekosisteman'ny finday an'i Microsoft dia tsy voamarina mandrakizay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Amin'ity indray mitoraka ity, Microsoft Edge dia ho tonga amin'ny iOS alohan'ny faran'ny taona
Antonio Morales placeholder image dia hoy izy:
Efa nanandrana ity mpitety tranonkala ity tamin'ny Windows 10 aho fa tsy nahafa-po ahy tanteraka.
Valiny tamin'i Antonio Morales
iOS 11 dia hita amin'ny 38,5% amin'ireo fitaovana roa herinandro aorian'ny nanombohany